UDAMIAN HURLEY-UBUNGAKANANI BENETHI, I-BIO, I-WIKI, UBUDALA, I-CAREER, UBUDE, UMHLA WOKUZALWA - IINDABA
UDamian Hurley-Ubungakanani benethi, i-Bio, i-Wiki, ubudala, i-Career, ubude, umhla wokuzalwa
Iminyaka eyi-18 ubudala
ENtshona End, eLondon, eNgilani
Malunga noDamian Hurley, uNyana kaSteve Bing no-Elizabeth Hurley
Umdlali weNgesi ukongeza kwimanaququin uyabizwa UDamian Hurley . Waziwa ngokuba yiNkosana uHansel von Liechtenstein ovela kwi-E! Ulandelelwano lweenethiwekhi, iRoyals. Ngaphezu koko, ukwangunyana wonyana weqonga, uElizabeth Hurley, kunye nosomashishini waseMelika, uSteve Bing. Umama wakhe, uElizabeth Hurley ubonwa ngokubalaseleyo ngendima yakhe njengoVanessa Kensington kuMike Myers's hit spy comedy, Austin Powers: International Man of Mystery (1997) nangenxa yokuba uMtyholi eBedazzled (2000). U-Bing ekuqaleni wakhanyela ukuba nguyise, i-DNA ijonge emva koko yamqinisekisa njengotata. Kwisivumelwano sedokodo lenkundla, uBing wavuma ukuhlawula i-1.8 yezigidi zeerandi ngezavenge zonyaka ze- £ 100,000 zikaHurley, nangona umama wakhe waxela ukwala nje intlawulo. UDamian Hurley wazalwa ngomhla we-4 ka-Epreli 2002 eLondon, eNgilane (indawo yokuzalwa / idolophu). Isiqalo sakhe sokuchonga / ukuchonga okwenyani nguDamian Charles Hurley. Umqondiso wakhe we-zodiac ngu-Aries. UDamian unenani loothixo kunye noGigh Grant, uDenis Leary, uDavid Beckham, kunye no-Elton John. Ukhulele eGloucester ecaleni kwakhe kunye nomama wakhe kwaye kamva waphila okwethutyana e-Australia ngenxa yobudlelwane bukamama wakhe kunye nomdlali weqakamba wase-Australia uShane Warne. Ubuzwe bakhe baseMelika-Bhritane kwaye ungowobuhlanga obuhlanganisiweyo. Ukusukela nge-2020, wabhiyozela umhla wokuzalwa kwakhe we-18th. Ukholo lwakhe ngamaYuda. Ngokumalunga noqeqesho lwakhe, waya kwiSikolo seHlabathi seHlabathi. UDamian Hurley kwakamsinya nje emva kokuba enze iintloko emva kokuphinda enxibe isinxibo sikamama wakhe esine-Verace, kwaye ngeli xesha ujikelezisa ingubo emhlophe ebonakala ngokungathandabuzekiyo njengembalwa evela kumama wakhe uLiz awayeyinxibe nge-90s. Ukonwabela ukudityaniswa okuthile kunye ne-canine yakhe yezilwanyana zasekhaya. Unabalandeli abakhulu kunama-33K kwiakhawunti yakhe ye-Instagram. Kutshanje, ngomhla wamashumi amabini anesibini kweyeSilimela 2020, utata wakhe uSteve Bing wasweleka ngokuzibulala eneminyaka engama-55 ngokutsiba ukusuka kumhlaba wamashumi amabini anesixhenxe wendawo yokuhlala eyakhiwe ngaphakathi kubumelwane beCentury City eLos Angeles, California. Skrolela ezantsi ukwazi okungakumbi ngomsebenzi wakhe, ubomi babucala, ubudlelwane, ixabiso lewebhu 2020, incopho, iwiki, usuku lokuzalwa, ubudala, iinkcukacha zekhaya, kunye nokunye.
Umsebenzi kaDamian Hurley oBambeleyo kunye neModeli
UDamian Hurley wayeqinile njengeNkosana uHansel von Liechtenstein kwiRoyals, u-E! Ulandelelwano lweenkwenkwezi kumama wakhe kuba uKumkanikazi waseNgilani. Yaziswa ngoJulayi 2016.
NgoDisemba u-2016, wabonakala kumdlalo weTV, Ewe, Kukho irub.
Ukongeze isikhundla sakhe kwisiqendu sika-Epreli 2018, Iindaba zam ziya kuba sisiqhamo kulowo msitho mkhulu.
NgoSeptemba 2018, watyikitywa yinkampani yemanequin Tess Management.
NgoJulayi 2019, ubonakala ekwikhampasi entsha yentengiso yevidiyo yomenzi wobugcisa u-Pat McGrath ecaleni kukaViolet Chachki, uSonjdra Deluxe, kunye no-Primrose Archer.
UPat obhalwe nguDamian 'skinspiring' njengoko wayemodela i-Sublime Perfection primer kunye nesiseko kwividiyo ekhokelwa nguSteven Meisel.
Ngaba uDamian Hurley UBUDLELWANE?
UDamian Hurley akazutshata kodwa kwaye utshatile. Akaneminyaka eli-18 edlulileyo yokutshata. Ngapha koko, ungumntu othile ngobuqu malunga nokuprintwa okuncinci malunga nobomi bakhe babucala. Kude kube ngoku, akakaqinisekisi ubudlelwane bakhe okwangoku. Ukongeza, akukho mahemuhemu malunga nokuthandana kwakhe kwezembali nakubani na. Ukuqhelaniswa kwakhe ngokwesondo kuqondile kwaye akangobufanasini. Ubonakala engatshatanga njengangoku kwaye uyonwaba ngobomi bakhe bangoku ngokukhetha umsebenzi wakhe kancinci kunokuchitha ixesha lakhe elingenambaliso ekwenzeni intombi / ukuthandana / ukuba kubudlelwane.
Ngaba nguDamian Hurley Gay?
Abalandeli bakaDamian Hurley badidekile kakhulu malunga nokuziqhelanisa nokwabelana ngesondo kukaDamian Hurley. Ngokubhekisele kwisini sakhe sokuziphatha ngokwesini, akangobufanasini. Ulungile ngesondo. Ngapha koko, abukho ubungqina bokuba uthandana nayiphi na indoda ngokufanelekileyo. Ke, kuyacaca ukuba akangobufanasini. Nangona ebonakala efana nomama wakhe, uElizabethe, isini sakhe siyindoda.
I-Net efanelekileyo kaDamian Hurley ye-2020
UDamian Hurley akalishumi elinesibhozo kwaye uzuze impumelelo enkulu kuqeqesho lokubonakala nokumodela. Uqokelele isixa esikhulu semali emsebenzini wakhe. Ukususela ngo-2020, ixabiso lakhe lewebhu liqikelelwa ukuba lijikeleze i- $ 500K. Unikezelo oluphambili lwengeniso luvela kwimodeli. Ukongeze isivumelwano kunye noLawulo lweTess ngoSeptemba apho afumana khona umvuzo obalaseleyo. Ukongeze wafumana imali yomsebenzi wakhe wokuba ngumzekelo kunye nePink House Mystique. Ufumene ubutyebi kwilifa likatata nakunina. Njengangoku, wonwabile kunye nengeniso yakhe kwaye uhlala indlela yokuphila ebizayo.
Izigaba: Tech-Iindaba Hollywood Iwiki
kwenzeke ntoni kwi-molly ringwald
UThomas james burris ngobomi
UDavid rodriguez chicago pd
Iminyaka emitsha kaMcdonald eve